नेपाली कांग्रेसकां उम्मेदवारहरु - Janapukar
प्रवास अमेरिका समाचार साहित्य भिडियो विचार हास्य टेलिचलचित्र सम्पर्क नेपाली कांग्रेसकां उम्मेदवारहरु प्रदेश नं. ६
१. सुर्खेत १.विरेन्द्रनगर नगरपालिका देबकुमार सुवेदी
बिरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पदमा देबकुमारसुवेदीलाई अघि सारेको छ । उहाँ विरेन्द्रनगर पार्टीको नगर सभापति हुनुहुन्छ । सुवेदी १२ नगरअधिवेशनबाट नगर सभापति निर्वाचित हुनुभएकोथियो । उहाँ सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुदै नेवि संघको पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएको थियो । जानकी सिंह
विरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नेपाली कांगेसले उपप्रमुख पदमा जानकी सिंहलाई उठाएको छ ।
उपप्रमुख उम्मेदवार सिंह २०४६ साल भन्दा अघि देखिनै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँ १२ औं महाधिवेशनमा पार्टीको महाधिवेशा प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ महिला संघको जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य हुँदै हाल महिला संघको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ ०६२–०६३ सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने क्रममा गिरफ्तार हुनुभएको थियो भने तत्कालिन लाटिकोइली गविसको वडा–७ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । भेरीगंगा नगरपालिका भूपेन्द्र चन्द भेरीगंगा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले भूपेन्द्र चन्दलाई प्रमुखमा उम्मेदवार बनाएको छ । २०४७ सालदेखि नेपाली कांगे्रसमा आबद्ध हुनुभएका चन्द पञ्चायत विरुद्धको अन्दोलनमा सक्रिय भएवापत ३ महिना जेल पर्नुभएको थियो । शिक्षण पेशामा आवद्ध गाउँ इकाइ सभापति हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएका नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँ द्वन्द्वकालमा नेपालगन्ज विस्थापित हुनुभएको थियो । रेणु ढकाल नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेकी रेणु ढकाललाई नेपाली कांग्रेसले भेरीगंगा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा अघि सारेको छ । ढकाल १२ जिल्ला अधिवेशनबाट पार्टीको जिल्ला सदस्य बन्न्ुाभएको थियो । युवा नेतृ ढकालले स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर महिला हुनुहुन्छ । गुर्भाकोट नगरपालिका
गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले हस्त पुनलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पूर्व जिल्ला सदस्य पुन हाल गुर्भाकोट नगर कार्य समितिका सभापति हुनुहुन्छ । पुनले स्नातक सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । मैन वि.क नेपाली कांग्रेसले गुर्भाकोट नगरपालिकामा दलित महिला मैना विकलाई उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएको छ । महीला संघको जिल्ला कोषाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेकी विक हाल पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुन्छ । पञ्चकुमारी नगरपालिका
पञ्चकुमारी नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसले पूर्व गाविस उपाध्यक्ष उपेन्द्र थापालाई प्रमुखमा उम्मेदवार बनाएको छ । थापा २०४९ मा गाविस उपाध्यक्षका रूपमा जनप्रतिनिधि भई काम गरिसकेको व्यक्ति हुन । २०५४ मा भने गाविस उपाध्यक्षमा पराजित भए । अघिल्लो पटक पार्टीको का.वा. सभापतिको जिम्मेवारी रहेका थापा हाल महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ । थापाले एसएलसी सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । मुक्तिदेवी रेग्मी पुरी
पञ्चकुमारी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले मुक्तिदेवी रेग्मी पुरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर पूरी महिला संघको क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ । विद्यार्थी कालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सक्रिय उहाँ क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
५.लेकबेसी नगरपालिका उमेशकुमार पौडेल
लेकवेसी नगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले उमेशकुमार पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । पाटन क्याम्पसको नेविसंघ इकाइ सभापति समेत रहनुभएका पौडेल जिल्लाकै उत्कृष्ठ गाईपालक व्यवसायीका रुपमा मानिनुहुन्छ । उहाँशिक्षक रहनुभएको थियो । निलमति वि.क
नेपाली कांग्रेसले लेकबेसी नगरपालिकामा नेपाल महिला संघकी जिल्ला कोषाध्यक्ष निलमति विकलाई उपप्रमुखममा उम्मेदवार बनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रहनुभएकी विक घरेलु विकास समितिको ट्रेनरको रुपमा काम गर्नुभएकोे छ । वि.कले आईए सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । Like us on Facebook Like us on facebook